UVeer P. Patel, u-Esq. - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Amalungu eQela/ UVeer P. Patel, u-Esq.
Oko kwasungulwa i inkampani yezomthetho kwiJersey City, Bendisebenza njengoMmeli woKhuselo lweNtshabalalo ndinceda iintsapho ukulungisa okanye ukunciphisa imithwalo yazo kwiindawo ezixineneyo ezihambelana ne-NJ Home Foreclosure. Yonke imihla, ndiye ndaba liGqwetha lezoKhuselo elingcono Ukuxelwa kwerhafu ye-NJ yeTyala kwaye Ukuxelwa kwangaphambili kwezezimali ze-NJ, kwaye andizukwazi ukonwaba ngommandla wam wokusebenzela. Ndikhe ndanethamsanqa elihle kunye nembeko yokuba namaqabane aphumeleleyo endincoma ngokuthanda kwabo kunye neendawo zokuziqhelanisa kwaye oku kuthetha iziphumo ezingcono kunye nezixhobo ezininzi zabaxhasi bethu. Elona xesha linomvuzo kakhulu kukubona ifuthe endinalo kwiintsapho zonke, nendlela isiphumo somsebenzi wam esikhokelela kubomi obahluke ngokupheleleyo kwabaninzi.
Ukuthanda kwam umthetho kwaqala ekholejini eRutger kwaye kwaqala kwasekuqaleni. Uyabona, andinasikolo somthetho kumakhadi am. Injongo yam yokuqala yayikukuya ekholejini yabahlali emva koko nditshintshele eyunivesithi yeminyaka emine. Kunokwenzeka, ube ngumfundisi. Bendingazi ukuba iYunivesithi ikhangeleka njani, okanye ukuba imfundo enomsila ephezulu inyani. Kwakungumbulelo kwinkxaso evela kumzala okhethekileyo owandishukumisela ukuba ndithathele ingqalelo iRutgers. Ndifumene ukwamkelwa kwiNgxowa-mali yeThuba leMfundo. Inkqubo ye-EOF (inkqubo eyilelwe ukunika abo phakathi kwethu abasuka kwiimeko ezinzima ukuba bathunyelwe kwimfundo ephezulu). Ndathi xa ndihamba ndaya ekhampasi, kwakungathi isibane sibhabhile.
Ukuvezwa, ukubhengezwa, ukuchitheka kweelahleko, Izindlu ezithengiswayo, kunye neMicimbi yeChancery.
Nditshintshe njani njengoMmeli oMkhulu wokuKhuselwa kweNtsholongwane yaseNew York
Ndincedile ekufumaneni ubuhlobo, ndaba ngumongameli welona rhulumente mncinci kwimbali yesikolo iRutger, ndahlala kwiikomiti kunye nabaGwebi bakaRhulumente. Ndaze ndayibhalela iintetho Booker Cory (libali elahlukileyo!), inike idilesi eqinisekisiweyo yeklasi yam yokuphumelela (yabona apha: https://www.youtube.com/watch?v=4qBdz7oBd7Q), kunye nolona luphumezo lwam lukhulu… Ndifumene umfazi wam oza kubakho kwiklasi ye-phycology yentlalo. (Ngoku sinomntwana wethu wokuqala apha endleleni.)
Ngexesha lam eRutger, ndadlula ndiguqukayo, kwaye ndaqalisa ukucinga okukhulu! Ndifuna ukufunda malunga neenkokheli zamalungelo oluntu, kungekuphela apha e-United States kodwa nakumazwe aphesheya- le yinto ekhokelela ekuthandeni kwam umthetho, ngokukodwa njengoMmeli woKhuselo lweNtshabalalo esindisa amakhaya abantu. Ndafaka isicelo sesikolo somthetho kwaye ndaqala kwi2009. Esikolweni, ndiye ndaqala ukuchaza ukungabikho kokusesikweni endikuqaphele apha naphaya, kunye nokuhamba kwexesha. Khumbula ukuba bendihamba kwisikolo somthetho emva nje kokudodobala okukhulu kokubukela, ukubukela i-trillion ihamba ukuya kwiibhanki ezinkulu ngaphandle koncedo kwizigidi zabantu baseMelika abasebenza nzima abaphulukene namakhaya abo ukuchithwa. Ukupheliswa kwazo zonke ezi zinto kukhokelela kumdla wam kumthetho wokubekwa phambili, ukusebenzela iintsapho, hayi iibhanki.
Okwalo mzuzu ndafumana ithuba, ndathetha naye Derek kunye noLazaro kwaye samisela le nkampani kunye. Injongo yayilula, sebenzela abantu kwiindawo eziqinileyo, kwaye baziphilise beyenza. Oko kwasekwayo, asikhangeli ngasemva. Ndichulumancile ukuba unyaka nonyaka siyaqhubeka nokukhula, kwaye unyaka nonyaka sinceda ngaphezulu kokugqibela. Ndikunye neqabane lethu elitsha uJason Bost, umsebenzi wethu ngoku useBrooklyn New York. Xa abahlobo bam bandibuza ngento endiyenzayo, ndinekratshi. Ndinceda abantu - ayikho indlela engcono yokusebenza.